Etu ị ga-esi chọta Ọnọdụ ibu dị na Italy | Save A Train
Home > Travel Europe > Etu ị ga-esi chọta Ọnọdụ ibu dị na Italy
(Emelitere ikpeazụ On: 12/06/2020)
Ciao! Ị na-eme atụmatụ na njem nke a ndụ na Italy! Ọ bụ na ebe omumu nke Renaissance na a obodo na nkwa elate na-akpali gị n'ihi na nke ọrụ nkà, ije, Ihunanya ya na nri. Italy bụ ezi obibi nke gastronomy. Efere na-bụghị naanị na-eje ozi dị ka nri, ha kere. Mgbe ị na-ịgagharị a ifufe obodo nke ihe ijuanya, ebe ị pụrụ ịchọta ihe ekpe akpa ebe ke Italy?
Ije ije na ya cobbled n'okporo ámá, tinye ke palipable ambiance nke ahuhu, eme ka ọ na a ịwụ-ndepụta ebe. The naanị ihe nwere ike ibibi romance na-enwe bufee akpa gị na gị n'ihi na onye chọrọ ka-anyịgbu n'ebe nile ị na-aga? Lkwụ ụgwọ n'efu na obi ụtọ bụ ụzọ iji gaa njem gburugburu Italytali ma mee nke a ị nwere ike iji ọtụtụ ebe mkpuchi aka na Italytali..
Train Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Tiketi ụgbọ oloko dị ọnụ ala Weebụsaịtị N’ Thewa.
Left akpa ọnọdụ Na Ọdụ
Nhọrọ dị mma ma dị mfe maka ịchekwa mkpuchi, on a akwụsị, bụ na ọdụ ụgbọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere a free ụbọchị na-enweghị a hotel. Buru n'uche na na isi ehiwe ọdụ ụgbọelu na nke a bụ ihe dị mfe nhọrọ, ma nta ọdụ ụgbọelu nwere ike trickier otú gị nnyocha tupu ị ga-esi gị họọrọ ọdụ. Ọ kachasị mma ịlele tupu oge eruo site na ịga na ebe nrụọrụ weebụ ọdụ ụgbọ elu iji chọta ebe mkpuchi akpa na Italytali.
Bari na Fasano tiketi
Taranto nye Fasano tiketi
Milan na tiketi Florida
Venice na Milan tiketi
Milan Malpensa Airport bụ ekpe ibu na-emi odude na Bịara larịị nke Ọnụ 1. Ọ bụ na-emeghe kwa ụbọchị site na 6 onwem na 10 pm. akwụ ụgwọ ịdị iche iche, maka a obere item, ị ga-akwụ banyere € 3,50, maka nnukwu ihe dị ka € 4 na nke ọ bụla maka 24 awa.
Rome Fiumicino Airport bụ ekpe akpa bụ na n'ala nke enweghị Ngwọta 3. Ọ bụ na-emeghe kwa ụbọchị site na 6:30 onwem na 11:30 pm na ga-eri ihe € 6 kwa ihe maka a 24-hour oge.
Venice Marco Polo Airport si ekpe ibu ọrụ bụ n'ala, n'ime ọdụ ụgbọ ọnụ na ohere 1. Ha na-emeghe kwa ụbọchị site na 5 m ka 10 pm, ma ugboro nwere ike ịdị iche na oyi.
Milan na tiketi maka Naples
Florence na tiketi maka ndị Naples
Venice na Naples tiketi
Pisa na Naples tiketi
Ga-echekwa ngwongwo aka ekpe
Rome nwere atọ isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, Ostiense, Roma Termini, na Roma Tiburtina. Iled dara n'ezie n'ezie maka ịhọrọ ndị na -echekwa akpa mkpuchi aka ekpe na .tali.
Ọ bụrụ na ị na- na-agafe na ụgbọ oloko n'ihi na ehihie, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, ụfọdụ onwe-ọrụ.
I nwere ike na-atụ anya na-akwụ n'etiti € 10 na € 15 kwa ụbọchị, na nkezi. Dị ka a obere n'akụkụ leta, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ha dịkwa ukwuu maka ịkwakọba nri na mmiri maka ụbọchị, ịgbaziri anyịnya igwe na-eru ego.
Ngbanye na Milan
Gbọ oloko bụ ụzọ kachasị adaba iji gaa Europe na Milan, enwere ọdụ ụgbọ oloko anọ, Milano Lambrate, Milan Rogoredo, Milano Centrale na Milan Porta Garibaldi.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, na e nweghị ụkọ enye ọrụ n'ihi na ọ bụ oké mkpa mgbe ị na-na-aga n'ihu.
Oge nchekwa ohere na awa kachasị maka oghere mkpuchi aka ekpe na varytali dị iche iche maka ụlọ ọrụ dị iche iche ị ga-akwụkwa ego na € 10 ruo € 15 kwa ụbọchị.. E nwekwara ike ịbụ ibu mgbochi, n'ọnọdụ ụfọdụ ga-agba mbọ hụ na ị ga-enyocha nyocha ugboro abụọ.
Ebugharị na Venice
Venezia Santa Lucia bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Venice ma nwee plethora nke nhọrọ maka oghere mkpuchi ekpe na Italytali. Otu dị ka Milan na Rome, Venice na-enye echekwala nchekwa akpa aka ekpe di onu ahia.
Ụfọdụ ga nwere ibu iche na o kwere omume oge iche. Self-ọrụ mkpuchi ụlọ ahịa na-conveniently enịm nile Venice.
Milan na tiketi Genoa
Rome na tiketi Genoa
Florence na tiketi Genoa
Venice na Genoa tiketi
Ebe aka ekpe Gburugburu obodo na Hotels
Your mbụ ụgbọ mmiri gị ga-abụ hotel, mbikọ, ma ọ bụ Airbnb maka ọnọdụ mkpuchi. Mgbe ị enyocha, atụla egwu ịjụ n'ihi na ọtụtụ iche ga na-ekpe akpa maka free. Ya na-emekarị nanị maka a ụfọdụ ego nke oge otú ijide n'aka na ime ka ndị ahụ mkpa nkọwa.
Ase na n'ihu oche banyere nhọrọ maka safes na igbe. Nkume a obere n'ọnụ ma ọ bụrụ na ị na-enye akpa gị ka a oburu akpa.
Mpempe akwụkwọ Ekpe Onwe Ọrụ
Stow Your akpa
Nke a bụ a na-ewu ewu European oke na nwere a stellar aha. Anyị na-elekwasị anya na-Italy na ha nwere alaka Rome, Milan, Florence, Naples, Pisa, Catania, na Bari, na-eme ka n'aka na-ekpuchi niile nke Italy na ya famed obodo. Self-ozi a oké oke.
Zere edoghi na-uru nke 24-hour surveillance na ọtụtụ ihe, gị na-akpa na ịnshọransị maka ruo € 300.
Akpa Nchekwa itieutom
Nke a bụ a ekpe akpa nhọrọ kpọmkwem ka Venice.
Ga-ahụ ha n'ụlọ ezumike nke ọdụ ụgbọ elu Venice Marco Polo, ndị Venice Santa Lucia Railway Station, ndị Piazzale Roma, na Terminal Venice. Ọ aghụghọ e enịm ke ebe nke njem. Nke a na-eme ka ya na ezigbo oke idebe na-aga.
Mgbe ị na-aga Italy na gị mkpa ekpe ibu ebe, ya mere odi nkpa inyocha ya dika odi ka gị njegasi. Check ugboro, lelee mgbochi mgbochi, ma lelee ego ọ ga-akwụ, -akwadebe! Ọtụtụ ihe, enwe Italy, ibu free.
Nọgide na Save A Train iji chọta nhọrọ tiketi kacha mma dị na ọnụahịa kachasị mma!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ọnọdụ ebe iri aka ekpe dị na Andtali na otu esi achọta ha” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-italy/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie nl ka fr ma ọ bụ tr na ọtụtụ asụsụ nke ị họọrọ.
europetravel eurotrip leftluggage longtrainjourneys akpati ozu Train Travel travelitaly